Dil ka dhacay Marka iyo xiisad caawa magaalada ka taagan | KEYDMEDIA ENGLISH
Dil ka dhacay Marka iyo xiisad caawa magaalada ka taagan
Xiisad dagaal ayaa caawa ka taagan, magaalada Marka, kadib dil caawa ka dhacay halkaas.
MARKA, Soomaaliya- Kooxo hubeysan ayaa caawa magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha hoose ku dilay askari ka tirsan ciidamada nabad sugida ee magaaladaas ka howl galla.
Askariga la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Muqtaar Xaankeey, waxaana dilkiisa uu salka ku hayaa, dilal aanno qabiil ah, oo mudooyinkii ugu danbeeyey ka dhacayey gudaha Marka.
Xiisad xooggan ayaa ka dhalatay dilka askarigan, waxaana caawa Marka laga dareemayaa hub urruursi ay ku jiraan reerka marxuumka iyo beesha ay ka soo jeedaan kooxdii dishay, iyadoo guud ahaan xarumaha ganacsiga ee magaalada ay yihiin kuwa xiran.
Qaar ka mid ah dadka magaalada ku nool, ayaa warbaahinta u sheegay, in ay maqlayaan dhawaqa rasaas teel teel ah, waxaana saacadaha soo socda laga cabsi qabaa in magaalada uu ka qarxo dagaal.
Waxgaradka Marka ayaa wada dadaalo ay ku .qaboojinayaa xiisad taagan, waana kuwa ku talinaya in wada hadal lagu xalliyo waxyaabaha ay kala tabanayaan labada beel ee walaalaha ah.
Maalmihii ugu danbeeyey waxaa xoogeystay dagaal beeleedyada ka dhacaya, deggaanada uu ka taliyo maamulka Koonfur Galbeed, iyadoo ay xusid u mudan tahay, in bartamihii sanadkii aynu ka soo gudubnay, la xalliyey dagaal beeleedyo ka jiray magaalo xeebeedka Baraawe.
Dadka sida dhaw ula socda siyaasada Soomaaliya, ayaa maamulka Lafta-gareen, ku eeddeynaya inuu hurinayo colaad beeleedyada, ka soo cusboonaatay deggaanada uu maamulkaas ka arrimiyo, waana qorshe ka yimid Villa Soomaaliya, oo hoos loogu dhigayo awooddo ay Koonfur Galbeed ku leedahay beel gaar ah oo Soomaaliyeed.